खाना खाने व्यवहारले नै मानिसलाई रोग लाग्ने गर्छ !, खाना कसरी खाने ? | Seto Khabar
खाना खाने व्यवहारले नै मानिसलाई रोग लाग्ने गर्छ !, खाना कसरी खाने ?
प्रायः मानिसले खाने शैलीमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । तर, खाने व्यवहारले नै मानिसलाई रोग लाग्ने वा नलाग्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । अस्वस्थकर खानाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ । त्यसैले खानाको गुणस्तर, मात्रा र समयमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ । हाम्रो तौल र उचाइ अनुसार खानाको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया महिलाका लागि १६ सयदेखि दुई हजारसम्म क्यालोरी आवश्यक हुन्छ । र, पुरुषले १८ देखि २४ सयसम्म क्यालोरी लिनुपर्छ ।
दैनिक भोजनमा हरियो सागपात, गेडागुडी, फलफूल र पहेँलो खानेकुराको मात्रा सन्तुलित ढंगले लिन आवश्यक हुन्छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुलाई स्वस्थकर मानिन्छ । तर, एकैपटकमा ठूलो मात्रामा पानी पिउनुहुँदैन । यसो गर्दा मिर्गौलामा असर पुर्‍याउन सक्छ । दिनमा एकैपटक ठूलो मात्रामा खानुलाई पनि राम्रो मानिदैन । बरु थोरैथोरै ४–५ पटक खानुलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले उत्तम मानिन्छ । तर, खाने अवधिलाई लामो पनि बनाउनु हुँदैन ।
लामो समयसम्म नखाँदा ग्यास्ट्रिक तथा पेटसम्बन्धी अन्य समस्या निम्तिन्छ । पेट टम्म हुने गरी पनि खानुहुँदैन । रातको समयमा यसरी खाँदा अपच, मोटोपनलगायतका समस्या हुन्छ । माछा वा मासु खाँदा ३ देखि ५ टुक्रा मात्र खानु राम्रो हुन्छ । रातो मासु खानुहुँदैन र हप्तामा बढीमा एकपटक मात्र मासु खानु राम्रो हुन्छ । मानव शरीरलाई दैनिक डेढदेखि दुई लिटरसम्म पानीको आवश्यक हुन्छ । यदि शरीरमा पानीको अभाव भएमा बेहोस हुने, खुट्टा फर्कने, थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, झर्को लाग्ने जस्ता समस्या देखापर्न थाल्छन् । एजेन्शी